रिमार्केटिंग के हो | ई-वाणिज्य समाचार
एनालिटिक्स, सीआरएम र ठूलो डाटा
remarketing के हो
एनकर्नी आर्कोया | | मार्केटिङ
तपाईलाई पक्कै याद छ कि केहि वर्ष पहिले बाहिर आएको त्यो विज्ञापन जसमा एक जोडीकी महिलाले एक उत्पादनको बारेमा केहि भनेकी थिइन् र अचानक, उनीहरूले उत्पादनको बारेमा विज्ञापनहरू प्राप्त गर्न थाले। र तिनीहरूले निष्कर्ष निकाले कि इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूले हामीलाई जासूसी गरे र त्यसपछि हामीलाई व्यक्तिगत विज्ञापन देखाए। वा के समान छ, पुन: मार्केटिङ।
तर, remarketing के हो? यो के को लागि हो? यसमा के फाइदाहरू छन्? र त्यहाँ कस्ता प्रकारहरू छन्? यदि तपाइँ यस विषयमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी यसलाई तल विकास गर्नेछौं।
1 remarketing के हो
2 कसरी रिमार्केटिंग काम गर्दछ
3 पुन: बजारीकरणका प्रकारहरू
4 यसको के फाइदा हुन्छ
शब्दको खासै सम्बन्ध नदेखिए पनि सत्य यो हो। यी अनुकूलित, वा व्यक्तिगत विज्ञापनहरू हुन् जुन त्यो व्यक्तिको खोज वा आवश्यकताहरूमा आधारित हुन्छन्।
हामी उदाहरणको साथ स्पष्ट पार्छौं। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले इन्टरनेटमा रोबोट क्लीनर खोज्नुभएको छ किनभने तपाईं आफ्नो घर सफा गर्नबाट बच्न एउटामा रुचि राख्नुहुन्छ। तपाईंले यसलाई किन्नुभएको हुन सक्छ, वा तपाईंले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, जब तपाइँ अलिकति विच्छेदन गर्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जानुहुन्छ, यो थाहा हुन्छ कि यसमा देखा पर्ने विज्ञापनले रोबोटहरू सफा गर्नेसँग धेरै काम गर्दछ। के तिनीहरूले हामीमाथि जासुसी गर्ने हो? हो र होइन।
वास्तवमा, यो कुकीहरूमा दोष लगाइएको छ। ती साना फाईलहरू जुन हामीले यो महसुस नगरीकन अधिक र अधिक स्वीकार गर्दछौं, तपाईंलाई डेटाको एक श्रृंखला पठाउनको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि मात्र होइन, तर तपाईंको खोज र गतिविधि इतिहासमा पहुँच गर्न पनि सहमत गराउँदछ। र यसले त्यो प्रयोगकर्तालाई गुगल एडवर्ड्स प्रदर्शन अभियानहरूको लागि प्रयोग गरिने पुन: मार्केटिङ सूचीमा थपिने कारण बनाउँछ।
यसैले जब तपाइँ इन्टरनेटमा केहि खोज्नुहुन्छ, केहि समय पछि तपाइँ ती खोजहरु संग सम्बन्धित व्यक्तिगत विज्ञापन देख्नुहुन्छ। अनि कारण? ठिक छ, किनभने लक्ष्य तपाईलाई खरिद गर्न मनाउनु हो। वास्तवमा, केही अवसरहरूमा, विज्ञापनहरू देखा पर्नेछ जुन तपाईंले जाँच गरिरहनुभएको पसलहरूबाट हुनेछ, एक प्रकारको रिमाइन्डरको रूपमा ताकि तपाईंले बिर्सनु हुन्न कि, कुनै बिन्दुमा, तपाईं केहि किन्न जानुभएको छ तर तपाईंसँग छ। यो समाप्त भएको छैन (यद्यपि कहिलेकाहीँ, किन्न पनि, तिनीहरू सामान्यतया बाहिर आउँछन्)।
कसरी रिमार्केटिंग काम गर्दछ
प्रयोग गरिएको पुन: मार्केटिङ उपकरणमा निर्भर गर्दै, यसले एक वा अर्को तरिकाले काम गर्नेछ। तर तैपनि, अधिकांशले गुगल विज्ञापनहरू प्रयोग गर्छन् र यसले निम्न रूपमा काम गर्दछ:
Primero, प्रयोगकर्ताले खोज उद्देश्यको साथ वेब पृष्ठ भ्रमण गर्दछ (यस अवस्थामा हामी लेनदेन खोजको बारेमा कुरा गर्छौं किनकि यसले केहि खरिद गर्नेछ)। ध्यान राख्नुहोस् कि सूचनामूलक वेबसाइटहरूले प्राय: विज्ञापन गर्न Google विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दैनन्।
त्यो प्रयोगकर्ता, वेबमा प्रवेश गर्दा, कुकीहरू स्वीकार गर्दछ जसले तपाइँको ब्राउजिङलाई पुन: मार्केटिङ सूचीमा प्रवेश गर्दछ र त्यो व्यक्तिको इतिहास विश्लेषण गरिन्छ।
पछि को लागी, त्यो खोजमा लक्षित विज्ञापन अभियान प्रस्ताव गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दा, एक शहरमा केहि खोज्ने व्यक्तिले अर्को शहरमा उस्तै चीज खोज्ने व्यक्तिले समान परिणामहरू प्राप्त गर्दैन। किनभने तिनीहरू फरक सूचीमा छन्।
पुन: बजारीकरणका प्रकारहरू
रिमार्केटिंग के हो भन्ने कुरा तपाईलाई स्पष्ट भइसकेपछि, तपाईले जान्नै पर्ने अर्को कुरा यो हो कि यो अद्वितीय छैन; त्यहाँ धेरै रणनीतिहरू वा प्रकारहरू छन् जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा सामान्य हो:
मानक विज्ञापनहरू जुन मानिसहरूलाई देखाइन्छ जब तिनीहरूले पहिले ती पृष्ठहरू भ्रमण गरेका थिए। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं अमेजनमा जानुभयो र त्यसपछि विज्ञापनहरूले तपाईंलाई त्यो वेबसाइटबाट उत्पादनहरू देखाउँछन्।
गतिशील यो पहिलेको भन्दा फरक छ, तपाईलाई कुनै पनि उत्पादन देखाउनुको सट्टा, यसले के गर्छ तपाईले विशेष रूपमा देख्नु भएको देखाउँछ। वा जस्तै।
मोबाइल अनुप्रयोगहरूको। तिनीहरू मोबाइल फोनका लागि विशेष विज्ञापनहरू हुन्, र तिनीहरू त्यहाँ मात्र देखा पर्छन्।
खोज विज्ञापनहरूबाट। कल्पना गर्नुहोस् कि एक व्यक्तिले तपाइँको वेबसाइटमा उत्पादन खोज्दै प्रवेश गर्दछ तर यसलाई खरिद गर्न समाप्त गर्दैन। त्यसपछि विज्ञापनहरू उत्पन्न हुन्छन् जुन गुगलमा निश्चित कुञ्जी शब्दहरूको लागि देखा पर्दछ ताकि, जब उनीहरूले त्यो उत्पादन खोज्छन्, तपाइँको उत्पादन उनीहरूलाई तपाइँबाट खरिद गर्न मनाउन प्रयास गर्न आउँछ।
भिडियो को लागी। यसको उद्देश्य भिडियो वा च्यानलहरूसँग अन्तर्क्रिया मार्फत प्रयोगकर्ताहरूलाई खिच्नु हो। यो सामान्यतया YouTube को लागि मात्र हो तर वेबसाइट र एपहरूमा पनि देखा पर्न सक्छ।
सूची द्वारा विज्ञापन। त्यो हो, विज्ञापनहरू सङ्कलन गरिएका इमेलहरूको समूहमा देखाइन्छ (न्यूजलेटर, सदस्यता, आदि)।
यसको के फाइदा हुन्छ
यसमा कुनै शङ्का छैन कि रिमार्केटिंग इन्टरनेटमा हाम्रो दैनिक जीवनको हिस्सा हो किनभने हामीले प्रवेश गर्ने क्षणदेखि नै व्यक्तिगत विज्ञापनहरू त्यहाँ छन्। तर सत्य यो हो कि, व्यवसायहरूको लागि, यो सुधार गर्ने राम्रो अवसर हो।
किनकि म विज्ञापनहरूलाई लक्षित र निजीकृत गर्न मद्दत गर्दछ प्रयोगकर्ताहरूसँग। उदाहरण को लागी, एक स्टोर को लागी एक सामान्य विज्ञापन प्रयोगकर्ताले खोजिरहेको उत्पादन देखाउने त्यो स्टोर को लागी एक समान छैन।
सक्छौ रिमाइन्डरको रूपमा सेवा गर्नुहोस्। विशेष गरी यदि तपाईंले उत्पादन देख्नुभएको छ तर यसलाई खरिद गरिसक्नुभएको छैन।
ब्रान्ड बढाउनुहोस्, जब देखि मानिसहरूले यसलाई सम्झिरहन्छ।
तपाईं पाउनुहुनेछ तिनीहरूलाई किन्न मनाउनुहोस् किनभने यदि तपाइँ निरन्तर "इच्छाको वस्तु" देख्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ अन्ततः प्रलोभनमा पर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं सक्नुहुन्छ प्रभाव पार्ने अत्यधिक व्यक्तिगत विज्ञापनहरू विकास गर्नुहोस् र राम्रो परिणाम प्राप्त।
तपाईं पाउनुहुनेछ तपाईको मार्केटिङ रणनीतिको लागि बहुमूल्य डेटा र तपाइँको अभियानहरु कसरी गरिरहेको छ वा तपाइँ के मा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ जान्न को लागी प्रदर्शन रिपोर्टहरु।
"विज्ञापन" को यो तरिका तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्ने व्यक्तिमा मात्र पुग्दैन, तर विज्ञापनहरू देखा पर्न सक्छन् 90% भन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई, त्यसैले नतिजा प्रभाव तपाईंको पृष्ठको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
हामी भन्न सक्छौं कि रिमार्केटिंगको अधिकतम फाइदा भनेको तपाइँको पृष्ठमा गएका र रूपान्तरण पूरा नगर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु बाहेक अरू कुनै होइन, अर्थात् खरीद। यो एक पटक फेरि प्रभाव पार्ने अवसर प्राप्त गर्ने र ती प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको डेटा छोड्ने, किन्ने, आदिलाई कारबाही गर्न लगाउने तरिका हो।
हो, यसको मतलब वेबसाइटमा सबै खोजहरूको लागि विज्ञापनहरूका साथ इन्टरनेटमा बमबारी गर्नु होइन।, तपाईले सकारात्मक तरिकामा प्रभाव पार्न सक्ने एउटै कुराबाट, यदि तपाई सधैं सबै कुरामा बाहिर जानुहुन्छ भने तपाईले आफैलाई अदृश्य बनाउनुहुनेछ।
के यो तपाईलाई स्पष्ट छ कि रिमार्केटिंग भनेको के हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: ईकॉमर्स समाचार » मार्केटिङ » remarketing के हो
Packlink के हो?
कसरी अनलाइन व्यापार सुरु गर्ने
ECommerce मा पछिल्लो लेख प्राप्त गर्नुहोस्।